Dani Carvajal Oo Si Qiiro Leh Uga Sheekeeyay Xaaladii Xumayd Ee Uu Soo Maray Muddadii Uu Wadno Xanuunka La Dhibtoonayay Iyo In Uu Ciyaaraha Ka Fadhiisan Gaadhay. – WWW.Gool24.net
Dani Carvajal Oo Si Qiiro Leh Uga Sheekeeyay Xaaladii Xumayd Ee Uu Soo Maray Muddadii Uu Wadno Xanuunka La Dhibtoonayay Iyo In Uu Ciyaaraha Ka Fadhiisan Gaadhay.
Difaaca xulka qaranka Spain iyo kooxda Real Madrid ee Dani Carvajal ayaa sheegay in uu ku dhawaadaay in uu gabi ahaanba ciyaaraha ka fadhiisto kadib markii wadno xanuun laga helay September 30 markaas oo uu sheegay in uu soo maray xaalad aad u adkayd. Carvajal ayaa ka cabsi qabay in xanuunka dhinaca wadanaha ka soo wajahay uu sabab u noqon karay in uu xili hore ka dhex baxo ciyaarista kubbada cagta.
Dani Carvajal ayaa jamaahiirtiisa u cadeeyay in hadda uu taam buuxa yahay isla markaana la siiyay ogolaansha uu kulan ku ciyaari karo balse waxa uu qiray in aan la doonayn in uu garoomada ku soo deg dego isaga oo waliba cadeeyay in uu haddaba diyaar u yahay in uu ciyaari karo.
Dhamaadkii bishii September waxaa Dani Cavajal la sheegay in uu garoomada ka maqnaan doono muddo aan la garanayn maadaama oo nooca xanuunka wadnihiisa laga helay uu yahay mid ciyaartoyda sabab ugu noqon kara in ay gabi ahaanba ka fadhiistaan ciyaarista kubbada cata, laakiin daawayn iyo taxadar badan oo ay Madrid samaysay waxaa ugu danbayn lagu guulaystay in xidiga ree Spain ay rajadiisu noqoto mid fiican oo uu hadda diyaar u yahay in uu soo laabto.
Ugu horayn Dani Carvajal oo ka hadlaya cabsidii uu dareemay markii xanuunka dhinaca wadnaha ah laga helay ayaa yidhi: ” Anigu waxaan ka cabsi qabay haddii uu yahay mid halis ah, waxaa waajib igu noqon lahayd in aan ciyaaraha ka fadhiisto” ayuu Carvajal u sheegay Diario Madridista.
Dani Carvajal oo ka hadlaya waqtiyadii ugu horeeyay ee uu xanuunkan awgii u joojiyay wax walba oo ciyaartoy looga baahnaa ayaa yidhi: “Saddexdii ama afartii usbuuc ee ugu horeeyay waxay ahaayeen kuwii ugu xumaa, sababtoo ah waxba maan samayn karin, sare umaan qaadi karin heerka wadnahayga, qaabna umaan samayn karin waxa uu ahaa mid aad u hooseeyay. Jidhku waxa uu doonayaa dhaqdhaqaaq, gaar ahaan kuwayaga ciyaartoyda ah”.
Dani Carvajal ayaan loo ogolaan doonin kulanka Madrid Derby ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ee sabtida la ciyaari doono wuxuuna yidhi: ” Anigu waxaan jeclaan lahaa in aan u soo laabto si ka deg deg badan, laakiin dhamaadkii waxaanu gaadhnay heshiis ah in aan sidaa sameeyo kadib kulamada caalamiga ah. Taas oo dib iigu soo celin doonta qaabkii jidhka ee aan kulan tartan ah ku ciyaari karo, sidaa daraadded, waxaan awoodi doonaa in aan wajaho bil iyo badh ka hor Chrismaska”.
Carvajal oo ka hadlaya in hadda caafimaad ahaan uu taam u yahay ayaa yidhi: “Mabda’ahaan, waxaan haddaba anigu helay in caafimaad ahaan layga saaray si aan markale u bilaabo in aan ciyaaro iyada oo ayna jirin wax nooc dhibaato ahi, anigu ma filayo in ay wax igu dhici doonaan. Tababar badan ayaan qaabtay, marka laga reebo kubbada”.
Ugu danbayn Carvahal ayaa amaan u soo jeediyay Achraf Hakimi oo booskiisa Real Madrid u sii buuxiyay wuxuuna yidhi:” Achraf waa wiil fantastik ah, hadda ayaan isaga ugu hambalyeeyay in uu koobka aduunka la tagayo Morocco, isagu waa aad ayuu u da’yar yahay wuxuuna aad ugu gaajaysan yahay in uu wax barto wuxuuna leeyay hibo badan”.